watchOS 4 ichawedzera keyboard kuita mafoni | Ndinobva mac
Mushure memashoko akaunzwa vhiki rapfuura chete paWWDC 2017, zvishoma nezvishoma isu takatanga kuziva ese matsva maficha eanoshanda masisitimu akaunzwa. Imwe yezvinhu zvitsva muWatchOS 4, iyo OS yeApple Watch, ndizvo zvinoita iwe unenge uine sarudzo yekufona kubva pawachi pachayo.
Kunyangwe ichitaridzika kunge yeramangwana, chokwadi ndechekuti pane atove mawatch anoitendera, uye sezviri pachena Apple haisi iyo yekusara Kusvika ikozvino, Apple yakashandisa wachi seyokuzivisa, uye zvakare yaibvumidza kufona, asi nguva dzose kuburikidza naSiri (Indaneti inodiwa).
Zvino, software nyowani yaizobatanidza keyboard paWatch skrini kuti ukwanise kufona nhamba yefoni uye kutanga kufona. Zvinonakidza kuti izvozvi, tinogona kushandisa zvizere "foni" tisina kutora iyo iPhone muhomwe yako. Nekudaro, kana isu tichida kubaya kuwedzera, kunyaradza kufona kana kuiisa parinomira, isu tinongofanirwa kushandisa wachi yedu.
Haisi iyo yega ruzivo iyo watchOS inounza nayo. Zvakare zvakataurwa mune zvakapfuura zvinyorwa nevamwe vedu Pedro y Javier, watchOS inopa maziso matsva ekuona, new screen screen view, Apple App nyowani, nezvimwe zvakawanda.
Iyi yekuvandudza Ichave nekukurumidza kune vese vashandisi veApple Watch. Dzese idzi nhau dzinotarisirwa imwe nguva Kudonha uku, kana iyo software yaongororwa uye ichishandiswa nevose vanogadzira vari kuyedza iyo Beta zvikamu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 4 ichawedzera keyboard kuita mafoni
Apple inozivisa kuvhurwa kuri pedyo kweApple Store yayo muTaiwan